Somali News 07.13.21 | KWIT
Somali News 07.13.21
By Halima Osman • Jul 14, 2021
Sioux City Dimuqraadiga J.D. Scholten ayaa sheegay maanta inuusan u tartami doonin xafiiska waqti dhow. Xaqiiqdii, maanta Scholten wuxuu ku dhawaaqayaa inuu shaqo la qaban doono koox horusocod ah oo codadka reer miyiga ka raadisa gobollada lagu dagaallamayo. Ciyaaryahankii hore ee kubbadda koleyga iyo garyaqaanku wuxuu caan ku yahay ku dhowaad inuu ka adkaado Wakiilka muxaafidka ah ee lagu muransan yahay Steve King degmada 4aad ee Iowa sannadka 2018. The New York Times ayaa ku warramaysa in Scholten uu maleegayay inuu u tartamo guddoomiye iyo Senate-ka Mareykanka 2022.
Iowans waxay ikhtiyaar u yeelan doonaan inay iskood u maamulaan imtixaanada COVID-19 illaa imtixaanka Iowa laga bilaabo Jimcaha. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa ku dhawaaqday halkii laga sii wadi lahaa goobaha lagu wado, oo la bilaabay Abriil ee 2020, Iowans waxay ka soo qaadan karaan xirmooyinka tijaabada guriga qiyaastii 125 goobood oo kala duwan oo gobolka ah.
Labada goobood ee tijaabada Iowa ee Des Moines iyo Davenport ayaa xirmi doona maalinta Jimcaha.
Shaqaalaha korontada ee ka hawlgala magaalada Omaha iyo hareeraheeda ayaa wali ku hawlan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen korontada kumanaan macaamiil ah maalintii talaadada, afar maalmood ka dib markii duufaano xoog lihi ay ku dhufteen gobolka isla markaana ay ka tageen tiro dad ah oo ku nool Omaha koronto la’aan. Omaha Dadweynaha Omaha waxay sheegaysaa inay filayso inay yeelato ilaa 27,000 oo macmiil ah koronto la'aan oo soconaya saqda dhexe ee caawa.
Somali News 07.12.21
By Halima Osman • Jul 13, 2021
Guddoomiyeyaasha saddexda Gobol ee Siouxland ayaa maalintii ku qaatay Shirka Saddexda Gobol ee Gobollada ee Marriott ee Koonfurta Sioux City.
Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga ee Siouxland ayaa diirada lagu saaray yaraanta shaqaalaha ka jira gobolka.
Heshiisyada dhexmaray Iowa iyo Texas waxay muujinayaan Iowa inay ku deeqayaan adeegsiga askarta gobolka iyo qalabkooda “qiimo la’aan Texas” si loola dagaallamo dambiyada ka dhaca xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.